अनुभवबाट हामी थाह भाषण विभिन्न भागहरु संग लेखन "कुनै" चयन लागि कल विकल्पहरू लेखनमा सबैभन्दा ठूलो कठिनाई। nouns संग "कुनै" लेखन - हामीलाई विस्तृत विचार एक विशेष मामला गरौं। पहिलो, यो बाटो लिखित हुन कसरी ठीक गर्न सक्नुहुन्छ पत्ता नकारात्मक कण बोलीको एउटा स्वतन्त्र भाग संग।
संस्करण मात्र दुई - या त यो अलग वा सँगै शब्द को भाग र यसको morpheme रूपमा लेखिएको छ, एक सेट-टप बक्स रूपमा कार्य (एकाइ आकृति विज्ञान मूल सामना)।
को कार्य परिभाषित गर्न "हिज्जे" कुनै "को संज्ञा गर्न", यो आवश्यक भन्दा उल्लेख मामलामा फरक थाहा छ बोलीको भागहरु, सँगै वा अलग पछि सबै - यो हदसम्म विकल्प असर रूपमा!
संज्ञा , शब्द प्रकारका एक विशाल संख्या को अर्थ विज्ञान मा विभिन्न समावेश व्याकरण सुविधाहरू। एक साधारण अर्थ अभिमुखीकरण र कार्यात्मक अभिव्यक्ति नै श्रेणी हौं भनेर घटना को एक निश्चित दायरा प्रयोग गरिन्छ भन्ने शब्दहरू, lexical र व्याकरण श्रेणी बनाउन। शासन को लेखन जडानमा "छैन" एक संज्ञा हामी ठोस र अमूर्त अवधारणाहरु जस्तै फारम रुचि राख्नुहुन्छ।
तिनीहरूले वास्तविकता गर्न शब्दहरू संकेत अनुपात प्रतिष्ठित छन्। ठोस nouns वस्तुहरु, घटना, हाम्रो भर्चुअल वास्तविकता मा प्रस्तुत प्रतिनिधित्व भन्ने तथ्यलाई द्वारा विशेषता छन्। बस राख्नु, यी आफ्नो उपस्थिति, गुण विशेषता द्वारा पेश गर्न शब्दहरू, विशेष अवस्थित, र (कम्तिमा सैद्धांतिक) छोयो गर्न सकिन्छ भनेर नाम, छन्। उदाहरणको लागि: हात्ती, कलम, कागज, पर्खाल, घन्टी, सन्टी, बक्स, भालु, बोट, हिउँ।
यसरी noun अक्सर निहित संख्यात्मक जोडी (सडक - सडक फूल - फूल)। सार nouns - अमूर्त घटना र वास्तविकता को अवधारणाहरु रूपमा धेरै वस्तुहरू denoting शब्दहरू। उदाहरणको लागि: इमानदारी, विश्वास, दया, साहस, उचाइ, पौडी, पहाड बैठक, घनिष्ठता, स्मृति, उपलब्धि, जिम्मेवारी। नियम, तिनीहरूले एक correlative संख्यात्मक फारम छैन, अर्थात्, यो Singular वा बहुसंख्यक छन्।
लेखन "छैन" एक संज्ञा विषयको फर्केपछि र माथि सामाग्री आधारित पहिलो नियम सम्झना: "कुनै" विशिष्ट वस्तुहरु, वस्तुहरू अलग लिखित हुनुपर्छ (कुनै सीट, कुनै सामान, एक ब्वाँसो, कुनै हट, कुनै Acacia)। एक अमूर्त वाणी यस भाग बन्द - र सँगै र अलग। सँगै हामी निम्न अवस्थामा लेख्न हुनेछ:
- यो नकारात्मक कण (दोष, दोष, undershoot, absurdity) बिना शब्द प्रयोग गर्न असम्भव छ भने;
- यदि त्यहाँ संग टोकन प्रतिस्थापन गर्न भेरिएसनहरूमा छन् meaningfully थाहा "छैन" अभिव्यक्ति वा अवधारणा (अज्ञानता - शिक्षा को कमी, शत्रु - शत्रु विफलता - विफलता)।
nouns संग लेखन "कुनै" को अलग अवस्थामा:
- जब, दुई विरोध को सन्दर्भ मा homogeneous सर्तहरू, र यो विरोध औपचारिक को संयोजनमा "र" (छैन आनन्द तर समस्या; एक सफलता र असफलता) द्वारा व्यक्त गरिएको छ;
- इन्कार तार्किक शब्दहरू संयोजन जोड छ भने: कुनै तरिका, छैन सबै, छैन सबै, कुनै हालतमा, बिल्कुल छैन, र यति मा (छैन साहस, resourcefulness छैन) ...
अब, भविष्यमा यो सरल अल्गोरिदम, नकारात्मक कण "छैन" एक संज्ञा लेखन को एक विस्तृत अध्ययन, साथै विशेषण, विशेषण र participles संग रूपमा, हामी अधिक चाँडै नेभिगेट गर्न सक्नुहुन्छ सम्झना र गल्ती छैन।
"चापलूसी", पर्यायवाची र उपयोग को उदाहरण को अर्थ
रूसी भाषा: क्रिया अनिश्चितकालीन फारम - यो छ ...
कसरी: ग्राम वा ग्राम?
श्री - यो हुनुहुन्छ? शब्द सबै मानहरू
अंग्रेजी मा Gerunds
सुविधा र नियमहरू: रूसी भाषामा भौगोलिक नामहरू विचलन
Lithospheric प्लेट: lithospheric प्लेट को सिद्धान्त
Knauf कम्पनीका उत्पादहरू: फ्लोर तत्वहरू सूखी सम्बन्धहरूको लागि
एक वर्णन, सम्भव कारण र उपचार विशेषताहरु: बिरालोहरु मा Eosinophilic कणिकागुल्म
VAZ-2110 पंप: उपकरण र प्रतिस्थापन
रेस्टुरेन्ट "व्यापारी" (पेन्जा)। वर्णन, भाँडा, समीक्षा
हामी आत्म-संरक्षण को अन्त गुमाए?
लाभ, हानि र पकाएको स्क्विड को क्यालोरी सामग्री
सुन्दर शैलीहरू sundresses: रोचक मोडेल, ढाँचाहरू र सिफारिसहरू
को लोखर्के कुनै पनि जात को सेक्स कसरी निर्धारण गर्ने?